काठमाडौं केही महिना अघि तामझामका साथ तीनकुने क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गरियो । जडान कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्नि सापकोटा देखि भ्याली डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्री सहभागी थिए । एउटै क्षेत्रमा यति धेरै सीसीटीभी जडान गरिएकोमध्ये तीनकुने पनि हो । सीसीटीभीको निगरानीमा तीनकुनेका अधिकांश स्थानहरु रहे । यसकारण यो क्षेत्र निकै सुरक्षित रहेको ठानियो ।
उक्त क्षेत्रमा आवतजावत गर्नेहरुको निगरानी गर्न सकिने अवस्था छ । तीनकुनेमै रोशनी शाहीको कोठा छ । जहाँ निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा १२ असोजको राति पुगेर ज’र्बजस्ती गरेको आ’रोप आयो । उनी त्यहाँ पुगेका थिए कि थिएनन् ? यो प्रश्नको प्रमाणिक उत्तर नेपाल प्रहरीसँग मात्र छ । किनभने सीसीटीभीको विवरण प्रहरीसँग सुरक्षित हुन्छ । रोशनीको कोठा वरिपरि महराको गाडी पुगेको थियो कि थिएन ?
उनी एक्लै पुगेका थिए या सुरक्षाकर्मीलाई पनि साथ लिएर पुगेका थिए ? सीसीटीभीको फुटेजले प्रष्ट पार्छ। विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीसँग यी भिडियो फुटेजहरु रहेको छ। फुटेज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसम्म पुगेको थियो । १३ असोजमा विहानै ओली र प्रचण्डबीच छलफल भयो । महराबाट गल्ती भएको देखिएपछि उनीहरु कठोर कदम चाल्ने निष्कर्षमा पुगे ।
कुनै महिलाले आरोप लगाउँदैमा देशमा कसैको पद नगएको अवस्थामा महराको पद जानुमा भिडियो फुटेज पनि कारण बन्यो । घटना घटेको रातिको भिडियो फुटेज मगाएर हेरे पछि महरालाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो । नत्र महरा राजीनामाका लागि तयार थिएनन् । मिडियामा आएकै भरमा र कसैले आरोप लगाएकै भरमा सभामुख जस्तो पद जाने थिएन ।
महरा १२ असोजको राति आइतबार तीनकुने क्षेत्रमा पुगेको प्रमाण भेटिएको छ। यसैले उनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको थियो। घटनाबारे रोशनीले मिडियामा अन्तवार्ता दिइसके पछि विपक्षीले समेत गम्भीरताका साथ लिएपछि प्रचण्ड समेत आफ्नै विश्वासपात्रलाई राजीनामा दिन लगाउने अवस्थामा पुगेका थिए । रिपोर्टर्स नेपालबाट
दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्षको गाडीमा आगजनी
August 11, 2019 August 11, 2019 alertkhabar
काश्मिरमा, मोबाइल, इन्टरनेट देखि टेलिभिजन बन्द ! काठमाण्डौमा रहेका काश्मिरीहरु रुन कराउन थाले !
August 8, 2019 August 9, 2019 alertkhabar
छोरा विदेशमा अलपत्र आमा नेपालमा नौ वर्ष रोएर वित्यो (भिडियो सहित)
July 25, 2019 July 25, 2019 alertkhabar